Tohatra ho an'ny alika, sorohy ny fijalian'ny valahana miaraka amin'ireo maodely ireo | Tontolo alika
Ny tohatra dia iray amin'ireo fitaovana ilaina amin'ny fiainantsika. Mba hahafahana miakatra sy midina gorodona na haavo samy hafa dia tena ilain'izy ireo. Ka raha mankany amin'ny tontolon'ny biby isika, ny tohatra alika Tsy afaka tavela any aoriana izy ireo. Izy ireo koa dia ampahany amin'ny fiainany, indrindra amin'ny fotoana tena manokana.
Noho izany, mila fantatrao ny tombony mahazatra indrindra Hanolotra ny tohatra ho an'ny alika izy ireo ary koa ny fampiasana izay homenay azy ireo ary rehefa tena atolotray azy ireo tanteraka. Izany rehetra izany sy ny maro hafa, mieritreritra foana ny fiononan'ny biby fiompintsika, izay no tena zava-dehibe amintsika. Manana ny anao ve ianao?
Tohatra alika Benoon ...
FOReverweihuajz Ho an'ny...
Tohatra fitsangantsanganana ho an'ny...
Tohatra Galatée ho an'ny...
1 Maninona no mora ny mampiasa tohatra amboa
2 Tombony amin'ny fampiasana tohatra alika
3 Fampiasa matetika amin'ny tohatra alika
3.1 Mandehana eo ambony fandriana na sofa
3.2 Midira ao anaty fiara
3.3 Mialà amin'ny pisinina
4 Inona no hotadiavina rehefa mifidy tohatra alika
5 Ny fiompiana alika izay nanolorana azy ireo hampiasa tohatra
6 Alika sa tohatra? Safidy iza no tsara kokoa?
7 Aiza no hividianana tohatra alika mora vidy
Maninona no mora ny mampiasa tohatra amboa
Eny, valiny tena tsotra izany, satria misy biby maro mandritra ny tontolo andro avy eo am-pandriana ka hatramin'ny sofa, ny fanaovana fitsambikinana izay amin'ny fotoana maharitra dia mety hanimba ny fahasalamany. Ny karazana sasany dia manana hazondamosina marefo tokoa, izay hitarika olana sasany na aretina isan-karazany. Tsy lazaina intsony fa mijaly isaky ny mitsambikina koa ireo tonon-taolana. Ilaina tokoa ny fananana fanampiana ary indrindra rehefa mihantitra ilay biby. Fantatrao izao fa izy io dia iray amin'ireo fitaovana ilaina ilainao amin'ny fiainanao sy ireo an'ny volonao.
Tombony amin'ny fampiasana tohatra alika
Manakana ny fanaintainan'ny lamosina.
Hisorohana ny biby tsy hitsambikina sy miverina rehefa te hiala sasatra izy ireo.
Isaky ny mitsambikina izy ireo dia afaka manimba ny tonon-taolana, izay hiarovana sy hikarakarana azy ireo ny tohatra alika.
Toy izany koa dia iray amin'ireo fomba tsara kokoa hikarakarana taolana, satria izy ireo no manaraka izay mijaly amin'ny fitsambikinana marobe, afaka vaky haingana kokoa.
Fantatrao ve fa ny ankamaroan'ny ratra dia azo sorohina amin'ny fanampiana toa izao?
Hatsarao ny fiainanao satria miaraka amin'ny tohatra alika dia hampihena ny ezaka ataonao izahay.
Fampiasa matetika amin'ny tohatra alika
Ny iray amin'ireo fomba amam-panao raiki-pitia indrindra izay ananan'ny alika dia ny afaka miakatra amin'ny fandriana sy ny sofa. Raha eo isika, dia hihazakazaka izy ireo ary indraindray, na dia tsy eo aza izahay dia fantatr'izy ireo fa manana toerana ao amin'io faritra io izy ireo. Fa ny zavatra hataonao dia fahazarana iray, izay araka ny efa nolazainay fa tsy hahasoa ny vatanao. Noho izany, hametraka tohatra izahay hanoro anao ny lalana marina. Marina fa tsy hianatra amin'ny andro iray ka hatramin'ny ampitso izy ireo, fa amin'ny faharetana kely kosa no hanaovan'izy ireo izany. Rehefa zatra an'io dia ny tohatra fotsiny no ampiasainy!
Ny iray amin'ireo fahazarana hitantsika amin'ny bibintsika isan'andro dia ny miditra ao anaty fiara. Rehefa tena mailaka izy ireo dia mety tsy ho tsikaritr'izy ireo fa afaka miakatra tsimoramora amin'ny fitsambikinana maro be izy ireo. Ka eo koa ny tohatra. Lavorary izy ireo raha miakatra sy midina rehefa miara-mandeha amin'izy ireo isika. Manampy anao handray ny dingana mety nefa tsy mila manentsina ny vatanao. Aza matahotra ihany koa raha maloto izy ireo satria mora diovina ny ankamaroan'izy ireo.
Raha tian'izy ireo ny milomano ao amin'ny pisinina dia afaka miala sasatra izy ireo rehefa manao fanatanjahan-tena kely ary izany dia zavatra mitranga aminy ary koa amintsika. Saingy aorian'ny fandroana dia mety ho sarotra ny fivoahana ary noho izany, tsy misy toa ny fanampiana antsika hiakatra amin'ny tohatra sasany. Hataony fohy ny diany miaraka amin'izy ireo ary koa, tsy mila manao ezaka mitovy amin'izany izy ireo. Ka izany rehetra izany dia tombony rehetra hodinihina!
Inona no hotadiavina rehefa mifidy tohatra alika
Isan'ny dingana: Tianay ny hampionona ilay mahery fo raha resaka fidirana sy fivoahana any ho any. Noho izany, ny tohatra alika dia mety manana dingana maromaro. Ny sasany mety tsy manana afa-tsy dingana roa mivelatra, fa ny maro kosa manana mihoatra ny telo na efatra. Noho izany, zava-dehibe ny avo loatra izy ireo ary raha ny safidy roa ihany no safidintsika, dia miaraka izy ireo fitaovana malefaka sy milamina ary vita. Aorian'izay vao afaka mandroso mitsambikina ianao.
Haavo ny dingana: Notanisainay izany ary averinay indray ny hevitra momba izany ny zavatra tsara indrindra dia hoe tsy dia manana halavany izy ireo ary raha misy dingana hafa. Indrindra ho an'ny alika kely kokoa na izay efa misy karazana aretina. Hatramin'io fomba io dia hitsambikina kokoa izy ireo, fa tsy misy fiantraikany be loatra amin'ny vatanao.
Dingana sakany: Toy ny amin'ny isan'ireo dingana ihany, azontsika atao koa ny mahita ny sakany isan-karazany. Ny fampiononana dia misy amin'ny ankapobeny, saingy tsy voatery ho toy izao foana, satria amin'ny habe antonony dia hamela ny biby fiompintsika hihetsika tsara koa izy ireo.
Miandry: Hiankina amin'ny ny endrik'ireo tohatra ireo mihitsy. Indraindray isika dia afaka mahita fa ny iray dia miandry kokoa noho ny iray hafa. Saingy raha manana dingana maromaro izy ireo, dia tsy ho tsikaritra loatra ny fanovana. Ny zavatra tsara indrindra dia ny tsy dia mideza loatra ary manome fampiononana ho an'ireo biby fiompintsika fotsiny izany.
Raha azo aforitra izy ireo: Manana isika ny safidy hisafidianana ireo aforitra. Ny tombony lehibe azon'izy ireo dia ny fametrahana azy ireo raha tsy rehefa hampiasa azy ireo isika. Raha tsy izany dia haka toerana kely dia kely izy ireo ary hitahiry azy ireo amin'ny zorony rehetra na ambanin'ny fandriana. Mba tsy hanelingelina azy ireo amin'ny fotoana rehetra tsy ampiasan'ny biby fiompy intsony.
Material: Ny hazo dia iray amin'ireo fitaovana ampiasaina indrindra amin'ireto tranga ireto. Fa mba hampahazo aina kely azy kokoa dia mety mesh nilahatra na rakotra velvety, izay manalefaka kokoa ny mikasika azy. Mazava ho azy, miaraka amin'ireo dingana tsy mihetsiketsika foana ary izay fonony azonao hosasana tsara. Mazava ho azy, amin'ny lafiny iray, manana rafitra plastika koa ianao, maivana ary mahazaka mitovy.
Ny fiompiana alika izay nanolorana azy ireo hampiasa tohatra
Amin'ny ankapobeny, ny fiakarana sy ny fidinana amin'ny tohatra dia tsy atolotra ho an'ny alika rehetra. Fa marina fa hisy ny maningana hatrany. Amin'ity tranga ity dia afaka milaza isika fa ny karazana rehetra izay vita amin'ny tongotra fohy sy vatana lava dia lava dia mila an'io famenony io isan'andro. Satria misy tia dachshunds na dachshunds, bassets na corgi aza dia marefo ary mety hiteraka olana amin'ny valahana izany, ny taolana sy ny tonon-taolana.
Mazava ho azy koa ny hazakazaka toa ny Labrador na ny mpiandry ondry alemanina dia mety hijaly noho ny valahany fa toy izany koa amin'ny hazondamosiko. Satria rehefa mitsambikina izy dia voafehiny ary handeha mihoatra ny tokony ho izy. Arakaraka ny maha-zokiny azy ireo no ratsy kokoa, saingy marina fa mila alika fanampiana koa ny alika kely hatramin'ny 4 volana. Ny fitandremana rehetra dia tsara ho an'ny biby fiompinay!
Alika sa tohatra? Safidy iza no tsara kokoa?
Io no fanontaniana mandrakizay, satria ao anatin'io dia mila manome toetra maromaro foana ianao mba hahitana safidy tsara kokoa. Voalohany indrindra, mandanjalanja ny haavony sy ny faritra hametrahana azy, na ny sofa io na ny farafara ary raha misy toerana malalaka ho an'ireo safidy roa ireo. Mazava ho azy, amin'ny lafiny iray ary ny iray amin'ireo zava-dehibe indrindra dia, raha ny fisorohana dia eo anilanao ireo tohatra. Fa raha misy alika misy anao na olana ara-batana dia tsara kokoa ny làlan-kivoahana ka tsy manery.
Toy izany koa, raha alika fohy tongotra io, araka ny efa noresahintsika, dia mety ho mpiara-miombon'antoka akaiky aminao indrindra koa ny tifi-danitra. Raha hitantsika fa afaka miakatra sisin-dàlana sasany ianao rehefa midina ny arabe dia afaka mifidy ny tohatra ianao. Araka ny hitanao, Tokony hieritreritra foana ny fampiononana lehibe an'ny biby sy ny fetrany isika raha manana izany.
Aiza no hividianana tohatra alika mora vidy
Amazon: Ahoana no hahakely azy io, Amazon dia manana izay ilainao rehetra ary amin'ity tranga ity dia tsy ho ajanona ao aoriana. Noho io antony io, eo amin'ireo tohatra ho an'ny alika dia manaitra antsika amin'ny hevitra mivalona sy azo esorina, miaraka amin'ny famaranana sy fitaovana samihafa. Fa miaraka amin'ny famaranana tsy mihetsika foana.
kiwiko: Ny fivarotana Kiwoko koa dia manolo-tena amin'ny tohatra ho an'ny alika sy maro hafa, izay anehoana azy ireo dingana telo, satria mahavita manampy bebe kokoa ireo biby fiompinay. Ny filaharana dia hahazo fampiononana, fiarovana ary fahalemena bebe kokoa ianao.
Matetika: Ny safidy mora indrindra dia hita ihany koa ao amin'ity magazay ity, nefa tsy hadinon'izy ireo fa samy hafa ihany koa ny famaranana amin'ny plastika na milahatra, izay manampy foana hisafidy ny tsara indrindra amin'ny tohatra ho an'ny alika.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Tontolo alika » Alika ankapobeny » Fitaovana alika » Tohatra alika